DEG DEG: Golaha deegaanka ee Magaalada Minneapolis oo jaraya dakhliga tamarta nadiifta ah, halisna gelinaya sinaanshaha isirka - Neighborhoods Organizing for Change
DEG DEG: Golaha deegaanka ee Magaalada Minneapolis oo jaraya dakhliga tamarta nadiifta ah, halisna gelinaya sinaanshaha isirka
Habeenimadii isniinta, golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ayaa cod bixin ah 7-6 ugu codeeyay in ay jaraan dakhliga tamarta nadiifta ah, halisna geliyaan barnaamijyada sinaanta – iyo barnaamijyo kale oo ay ku jiraan xuquuqda madaniga ah, la talinta iyo xiriirinta barnaamijyada wacyi geliya dadka cusub ee markii ugu horaysay raba in ay gataan guri, iyo dakhliga loogu tala galay mashruuca loo yaqaano One Minneapolis Fund, kaas oo bixiya deeqo lacageed ururada ku salaysan in ay la shaqeeyaan bulshada dan yarta ah kala shaqeeya yaraynta farqiga isirka iyo in la abuuro loo dhan yahay loona wada siman yahay.
Waxay sidoo kale u codeeyeen in ay jaraan dhaqaalaha loogu tala galay mashruuca tamarta nadiifta ah oo ay magaalada Minneapolis iska kaashadaan qaybo kale oo bulshadda kamid ah, taas oo ka dhigan $ 450 million in kharashka tamarta ee magaaloweyn sannad walba in Minneapolis isticmaali karaan si ay u soo saaraan horumarinta dhaqaalaha tamarta maxaliga ah oo nadiif ah, la dagaalanka faqriga tamarta ee qoysaska dakhligoodu hooseeyo, iyo in ay magaalada Minneapolis hormuud u noqoto mustaqbal tamar cusub. ( Si aad u aragto diiwaanka caddaynta ee waxyaabaha ay u codeeyeen in la gooyo, fiiri dhamaadka qoraalkan.) Codeynta miisaaniyadda tani waxa ay ahayd cod hordhac ah, taasoo ay micnaheedu tahay waxaan haysanaa ilaa bisha December 10-keeda in ay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis go'aankooda dib uga noqdaan.
Waa maxay sababta golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ay ugu codeeyeen in ay jaraan dhamaan barnaamijyada aan kor ku soo sheegnay? Waxay rabaan in ay badbaadiyaan mulkiileyaasha iyo maal qabayaasha degan qaar ka mid ah meelaha ugu qanisan magaalada oo dakhliga soo gala marka la isku celcelisyo uu gaarayo $ 2.50 million sanad walba. Iyaga oo ka doorbiday in dhamaan la jaro barnaamijyadda muhiimka ah ee aan soo sheegnay, qiimaha loo badbaadinayo dadkan maal qabeenka ahna ay tahay lacag qiimaheedu uu yahay mid lagu gadan karo hal koob oo kafeega latte-ga ah.
Golaha magaaladan ayaa markii ay doorashadda u tartamayeen waxaay ku ordayeen ajende ah mid ku salaysan sinaanta. Haddaba waa in lala xisaabtamo oo la weydiiyo in ay dib uga noqdaan go'aankii ay ku jareen dhaqaalaha.
Marka hore, halkan ka hel xaafada aad degan tahay. Hoos sii aad, si aad u hesho taleefanka laga waco qofka xubinta ama wakiilka golaha xaafadaada aad degen tahay.
Haddii aad degen tahay xaafada 2, 8, 9, 10, 11, or 12 (CMs Gordon, Glidden, Cano, Bender, Quincy, iyo Andrew Johnson) uga mahad celi Wakiilka xaafada aad degen tahay in ay ka soo horjeedsadaan cod bixinta lagu jarayo dhaqaalaha. Fadlan ka codso in ay horyaal ka noqdaan dib u soo celinta dhammaan dhaqaalihii iyo barnaamijyadda sinaanta iyo tamarta nadiifta ah ee la jaray sidii dib loogu soo celin lahaa.
Halkan ka akhri tusaale sidii aad ula hadli lahayd wakiilkaaga:"
Nabad miyaa, magacaygu waa ______ waxaan ku noolahay xaafada waxaan kuu soo wacayaa in aan uga mahad celiyo gudoomiyaha xubinta golaha codeeynta uu u codeeyay in dhimis lagu sameeyo miisaaniyadda, sinaanta iyo tamarta nadiifta ah. Waxaan kaa baryayaa in aad horyaal ka noqoto dib u soo celinta dhaqaalaha iyo miisaaniyada dhamaan barnaamijyadda oo dhan. Waad ku mahadsan tahay in aad u taagantahay sinaanta."
Haddii aad degen tahay xaafada 6, 7, 13, 5, 4, 3 or 1 (CMs Warsame, Goodman, Palmisano, B. Johnson, Yang,Frey iyo Reick) u sheeg in aad ka xun tahay sidii Wakiilka xaafada aad degen tahay uu utaageeraray cod bixinta lagu jarayo dhaqaalaha. Fadlan ka codso in ay ka soo noqdaan oo ay dib u soo celinta dhammaan dhaqaalihii iyo barnaamijyadda sinaanta iyo tamarta nadiifta ah ee la jaray sidii dib loogu soo celin lahaa.
Nabad miyaa, magacaygu ______ waxaan ku noolahay xaafada ______ waxaan kuu soo wacayaa in aan kuu sheego in aan aad iga xun nahay gudoomiyaha xubinta golaha codeeynta uu u codeeyay in dhimis lagu sameeyo miisaaniyadda, sinaanta iyo tamarta nadiifta ah. Waxaan kaa baryayaa in aad horyaal ka noqoto dib u soo celinta dhaqaalaha iyo miisaaniyada dhamaan barnaamijyadda oo dhan. Waad ku mahadsan tahay."
Gudoomiyaha Xubinta Golaha
Halkaan Taleefanada Geli
Waa kuwan qayb kamid ah waxyaabaha ay golaha magaalladdu u codeeyeen in la gooyo:
• $ 75,000 oo ah miisaaniyada loo soo jeediyay oo ahayd $ 150,000 looguna tala galay tamarta nadaafada ah. Magaaladana waxaa asal ahaan lagula taliyay $ 500,000 oo loogu talagalay iskaashigan; balse way gooyeen, waxayna ka dhigeen $ 75,000 guud ahaan.
• $ 150,000 oo ka mid ah miisaaniyada loo soo jeediyay $ 300,000 looguna talo galay qorsheeynta Waaxda Xuquuqda Madaniga ah iyo waliba daraasaadka la xiriira faraqa u dhexeeya jaalliyadaha kala duwan ee degan magaaladda.
• $ 125,000 loogu tala galay barnaamijyo ku salaysan la talinta iyo wacyi gelinta mulkiilayaasha iyo dadka dan yarta ah ee raba in ay gataan gurigooda ugu horeeyay.
• $ 150,000, dakhliga loogu tala galay mashruuca loo yaqaano One Minneapolis Fund, kaas oo bixiya deeqo lacageed ururada ku salaysan in ay la shaqeeyaan bulshada dan yarta ah kala shaqeeya yaraynta farqiga isirka iyo in la abuuro magaalo loo dhan yahay loona wada siman yahay. Hay'adaha iyo Ururadda qaatay lacagahan deeqda ah ee la jarayo sanadkan ayaa waxaa ka mid ah : Assistance Center ee Lao, Waite House, iyo Conflict Resolution Center.
• Kordhinta maalgelinta guddiyada iyo wakiilada magaalada, si ay u noqdaan kuwo ay u dhan yihiin dhamaan jaalliyadaha kala gedisan ee ku dhaqan magaalada, iyadda oo la jaray dakhligii lagu shaqaalayn lahaa, laguna tababari lahaa madax matalaya dadka laga tiro badan yahay.
• Hindisahan hadda lagu jaray miisaaniyada ayaa ayaa baabi'naya awooda iskaashi ee tamarta nadiifta ah, halka ay joogtaynayso barnaamijyo dhowr ah oo aan abuuraynin caddaalad dhaqaale oo mudo dheer la tiigsan karo. Xarunta kulamadda ee Convention-ka ayaa weli loo sii wadi doonaa in ay hesho lagac dhan $ 400,000 si ay xaruntu u kordhiso is xayeeysiinta. Soo jeedinta cusub ee ah in la samaayo "Holiday Market" laga sameeyo faras magaalada ayaa weli si buuxda loo maal gelinayaa. Dhamaan barnaamijyadan ama kuwa kale oo qaali ah ayaa la rabay in ay noqdaan kuwa loo baahan yahay in laga jaro miisaaniyada lagu taageero.